भुवन र रेखाको मित्रता मिडिया सामु मात्रै ? | filmyinfo.com
भुवन र रेखाको मित्रता मिडिया सामु मात्रै ?
आइतबार काठमाडौंको कुमारी हलमा ‘रामकहानी’को विशेष शोमा थुप्रै चर्चित कलाकारहरुको उपस्थिति थियो । तर, ध्यानाकर्षण हुन पुगे भुवन र रेखाको अकस्मात देखिएको मित्रता अनि घनिष्टता । केहि समय अगाडि मिडियामा चर्चाको विषय थियो अनमोल केसी माथि रेखाको ‘मेघास्टार’ व्यङ्ग्य, २-३ वटा फिल्म खेल्नेलाई मिडियाले मेघास्टारको संज्ञा दिएको प्रति रेखाको चोटिलो व्यङ्ग्य भुवनलाई पटक्कै मन परेन । भुवन यतिसम्म रिसाए कि, रेखा थापाको चलचित्र ‘मालिका’सँग आफ्नो चलचित्र ‘क्याप्टेन’ जुधाउन कस्सिए । तर अहिले ‘क्याप्टेन’को भीएफएक्सको काम नसकिएको भन्दै यो विषय टुङ्गिएको छ ।
भुवन र रेखाबिचको सम्बन्धमा जस्तोसुकै चिसोपना आएपनि मिडिया सामु भने उनीहरु मित्रवत् देखिन्छन् । भुवनलाई ‘महानायक’ समेत भन्न भ्याएकी रेखाले आफ्नो आइडल समेत भुवन भएको बताइन् । भुवन केसीले पनि रेखासँग कहिल्यै पनि सम्बन्ध नबिग्रिएको प्रतिक्रिया दिए ।
तर, भुवन र रेखाको मित्रता अनि घनिष्टता मिडिया सामु मात्रै हो कि ?
ऋतिक रोशन हलिवुड ‘एक्शन थ्रिलर’ फिल्ममा आउन सक्ने
नागेन्द्र श्रेष्ठको संगीतमा ‘उसको माया’ [भिडियो ]
निर्देशक ओम प्रतीकको ‘डान्स मन्त्र’ शुभारम्भ [भिडियो सहित]